Southwest Airlines inotanga kuongorora muBiden-inotuka mutyairi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Southwest Airlines inotanga kuongorora muBiden-inotuka mutyairi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Southwest Airlines inotanga kuongorora muBiden-inotuka mutyairi.
Chivimbiso cheSouthwest chekugadzirisa mamiriro acho zvakananga nemushandi ari mubvunzo, zvichitevera kuferefeta kwemukati, zvakakonzeresa kudzosera kumashure zvakanyanya uye zvinoda chirevo chakasimba uye chiito chechokwadi.
Maodzanyemba kwakadziva kumadokero haatenderi Vashandi kugovera maonero avo ezvematongerwo enyika pavanenge vari pabasa vachishandira vatengi.
Vamwe vakadaidza Federal Aviation Administration kuti ibatanidze uye vatarise hutano hwepfungwa hwemutyairi.
Ndege iyi zvakare yakave nechikamu chayo chekushoropodzwa kubva kune vanochengetedza, vachinzi "vaitya kumhomho yekuruboshwe."
Mutsara wehutachiona unoshandiswa kutuka Mutungamiriri weUS, VaJoe Biden, wakonzera kuferefetwa kwemukati neSouthwest Airlines.
Dallas-based carrier yakazivisa kuti yatanga ongororo yemukati mushure mekunge mumwe wevatyairi vayo asaina nemutsara wekuti 'Ngatiendei Brandon' negudzanzwi.
"Maodzanyemba kwakadziva kumadokero haitenderi Vashandi kugovera maonero avo ezvematongerwo enyika vari pabasa vachishandira Vatengi vedu, uye maonero eMushandi ega haafanire kududzirwa semaonero eSouthwest pamwe neVashandi vayo zviuru makumi mashanu nezvina," Southwest Airlines akadaro mukutaura nezuro.
Kukakavadzana uku kwakakonzerwa nemashoko ekuti mutyairi wendege pa Southwest Airlines kubhururuka kubva kuHouston, Texas kuenda kuAlbuquerque, New Mexico neChishanu vakati, 'Ngatiendei Brandon' kunyangwe gudzanzwi - ichangoburwa yekurudyi inochengetedza meme yave kodhi yezvinyadzi zvakanangidzirwa kuDemocratic yazvino. Mutungamiri weUS, VaJoe Biden.
Sekureva kwemutori wenhau weAP Colleen Long, anga ari mundege iyi, akapotsa abviswa mushure mekuyedza kubvunza mutyairi nezvekushandisa mutsara uyu.
Mapinduriro ekambani iyi akaita seasina kusimba pachiitiko ichi aita kuti vakawanda vade kuti mutyairi wendege uyu azivikanwe pachena uye adzingwe basa, vamwewo vachiti varamwa basa nendege yese. Vamwe vakatosvika pakufananidza kutaura anti-Joe Biden kutaura nekuzivisa kuvimbika nemagandanga.
Vamwe vakatodaidza Federal Aviation Administration kuti ibatanidzwe uye vatarise hutano hwepfungwa hwemutyairi.
Maodzanyemba Akadziva Kumadokero zvakare yakave nechikamu chayo chekushoropodzwa kubva kune vanochengetedza, vachinzi "vachinyengerera kumhomho yekuruboshwe."
Prof. Dea Mallin anoti:
November 1, 2021 pa 17: 17
Alert! Kutadza kwezviperengo!
Mune chimwe chezvinyorwa zviri mumagazini ino, mupepeti wako haana kuperetera izwi rekuti, "brouhaha."
Iri izwi rechiFrench rinoreva " kukakavara.
Mupepeti wako akaperetera kana kuti akabvumira kuti zviperereti "bruhaha" izvo zvisingagoneke muchiFrench.